'नेपाली भएर बाँच्ने छूट खोसिँदै' - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘नेपाली भएर बाँच्ने छूट खोसिँदै’
Posted by Headline Nepal | २५ असार २०७४, आईतवार १९:०० |
-वसन्त प्रकाश उपाध्याय
‘धेरै’ दिनदेखि ‘धेरै’ मान्छे ‘केही’ कुरामा लागिरहेछन् । दोस्रो चरणको चुनाव गरायो– वर्तमान सत्ता संयन्त्रले । थोरै ‘मतगणना’ अझै जारी छ । तर त्यो प्राप्ति बिर्सेर साझा–चासोको नाममा व्यक्तिगत–लालसा छरपष्ट पारिएको छ ।
झरी–बादलको मौसम हो यो । केही ठाउँमा देखिनेछन् बाढी– पहिरो । त्यो प्राकृतिक विपदको आरोप पनि एक दिन वर्तमान संरचनालाई लगाइन सक्छ । सवारी–चापले धसिने सडकभन्दा बढी निर्मम तरिकाले ‘कलम’हरु धसिएका छन् । फुर्सदै–फुर्सदमा वेफुर्सद रहेर सामाजिक–सञ्जाल सद्भाव र स्नेह विगार्न उद्यत छन् ।
हिजोका दिनमा गुरुहरुलाई गणना नगर्ने विद्यार्थीहरुले आज पर्व पारेर अनुराग छताछुल्ल पारेका छन् । ‘एई…!’ भन्दा ‘होई…!’ गर्दैनथे केही मान्छेहरुले महतोजीहरुलाई । तर परिवेश के मिल्न लागेको छ उनीहरु साखुल्ले –शिष्य बनेर ‘चाय’ का लागि बोलाइरहेछन् बालकोटतिर ।
बनाउनभन्दा बिगार्न मज्जा मान्नेहरु थुप्रा छन् । अचेल जानुस् त वालुवाटार । त्यहाँको घना रुख बोट विरुवा कस्तरी फाँडिएको छ । ‘रुख’ स्वीकार्य नभएर हो कि शितलता विरुद्ध उष्णता बढाउन ओली माड’सापले काट्न लगाएका हुन् ? त्यसको पत्तो छैन । तर यो निहुँ अहिले पाइएको भए त्यो ‘भाइरल’ होइन ‘भाइरस’ नै बनाउँथे धेरैले ।
सजिलो काम रहेछ– आगोमा घ्यू हाल्नु । कसले–कसरी कति दुःख बगाएर मुढा जुटाएको हो ? त्यो पनि हेर्नु नपर्ने । अनि कुन कर्मका लागि ‘अग्नि’ जगाइएको हो ? त्यसको महत्ववोध समेत गर्नु नपर्ने । सुकर्ममा व्रतवन्धको सेल पकाउन बालिएको आगो हो या सराद्धेको पीण्ड पकाउन जगाइएको आगो हो ? हेर्दै नहेरी ‘स्वाहा’ गरे भइहाल्यो ।
जीब्रो चल्छ कसैको । कोही कान कम सुन्छन् । कसैलाई दौरा सुहाउँछ । कोही कुर्था पाइजामामा रमाउँछन् । स्वभाव र शरीर बेग्लावेग्लै हुन्छन् । तर केही पढेको मान्छेलाई पक्कै थाहा हुन्छ– विज्ञप्ति र वक्तव्यको फरक । मनगढन्ते चियोचर्चामा यहाँ जुन रुपले ‘तील’लाई पहाड बनाइएको छ । त्योभित्र लुकेका छन् धेरै किसिमका आशयहरु ।
यहाँ धेरै चिज ‘प्रायोजित’ हुन्छन् । यतिखेर नै किन किन्न लागिएको हो ? १६ करोड मूल्यको गाडी घोडा । कसैको नामलाई बद्नाम गराउन भरिएको हुनसक्न माग–फारम । जागेका छन् केही नगदेवालीका कृषकहरु न्यायपालिका–कार्यपालिका कमजोर बनाउन । कार्की र देउवा त्यही सवालको शिकार बने । एकदिन फेरि डलर साट्न ‘मनी चेञ्जर’हरुले पछ्याउनेछन्– सोझी रोल्पाली सभामुखलाई । यो निर्विवाद सत्य हो, यहाँ ‘नेपाली’ भएर मात्रै बाँच्ने छूट हामीबाट क्रमशः खोसिँदैछ । धर्म त्यसै ‘निरपेक्ष’ बनाइएको होइन । देख्छौं हामी केवल लमतन्न सुतेको हाम्रो भू्गोल र उत्तर–दक्षिण । यहाँ त हामीलाई सक्न–सकाउन पर–परका भूमण्डल र प्रमण्डलबाट सोझ्याइएका छन्– भयंकर–भयंकर क्षेप्यास्त्रहरु । हामी त्यसैको खोक्रो ‘नाल’ भएर आकाशतिर फर्कदै थुकिरहेका छौं ।
Previousयुवा निर्देशक सागरको नयाँ म्युजिक भिडियो बजारमा आउने
Nextदैलेखमा दुई हेलिकोप्टर आकस्मिक अवतरण
दुई समूह बिच झगडा, एकजनाको मृत्यू
५ चैत्र २०७३, शनिबार १४:०४
५४ किलो सुनबाट निर्मित चर्पी !
४ मंसिर २०७३, शनिबार १०:३३
पुर्व गृहमन्त्री बस्नेतको घमण्ड :’ माओवादीको एजेन्डामा देश चलेको छ’
४ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०९:२२
वर्षायाममा पनि किन घटेन लोडसेडिङ ?
१३ श्रावण २०७३, बिहीबार ११:२७